ILoft kwiPiri💚Ndlu yeNdalo💚Inomtsalane kunye neTolo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAuri
Indlu yam yindlu yakho!
Sifumana amabali kwaye sizise okona kulungileyo kunye neyona vibes ilungileyo ukwenza iintsuku zakho zikhetheke ngakumbi!
Indawo yothando, ibhafu kwibalcony yangaphakathi, amanzi ashushu, abucala kwaye akhethekile kwigumbi eliphezulu, ikhitshi eligcweleyo, i-SMART TV, i-NETFLIX, ibhedi yokumkanikazi, i-air cond., i-wi-fi, indawo yokupaka. kunye nedama lokuqubha, ngokusetyenziswa okucwangcisiweyo.
I-1km ukusuka kwiziko lembali, iindlela kunye neengxangxasi ezikufutshane kunye nendalo eninzi ekufutshane.
Kuya kuba mnandi ukuba nawe njengomlandeli: casinha_piri
Indlu eluhlaza yasentwasahlobo isinika yona indalo!
Ukhathalelwe kwaye uhlanjululwe ngenxa yakho!
"Ijongeka ngathi yintwana yezulu eye yawa yaphela ePirenópolis, uGabriyeli orekhodiweyo, osele ehlala kwindlu encinci!
Indawo yokungena eLoft, eyenzelwe umntu ngamnye enesakhiwo esipheleleyo, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese kunye nebalcony yangaphakathi.
Ukufikelela kwi-loft yonke ngendlela ekhethekileyo neyimfihlo.
Ngokuxhomekeke kubhubhane, siphinda-phinda ukhathalelo kwaye sinqande ukuhamba kwabantu kwindawo enye, siqinisekisa ukhuseleko olukhulu kunye nococeko kuwe.
Upholile kwaye ukhululekile kubantu abayi-02, nayo yonke intuthuzelo oyifaneleyo!
Uya kuba neendawo eziyi-05:
- Igumbi lokulala, i-queen bed, i-200 ye-thread count sheets, ibhedi ekhululekile kunye nelinen yokuhlambela, umgangatho wehotele;
- Ikhitshi epheleleyo, ekhoyo kunye nezixhobo kunye nezitya ezikuvumela ukuba wenze i-pasta efanelekileyo okanye ikhofi elula, egcwele iprose;
-Igumbi lokuhlala, igumbi elinesofa, i-SMART TV kunye nomjelo.
- igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye
- I-Balcony yangaphakathi - ifumene isiteketiso esithandekayo se-CANTINHO DO SPA, kunye nebhafu yekhefu elifanelekileyo, ukuphumla kunye nokuhlaziya amandla amahle kunye nokungcangcazela. Ibucala ngokupheleleyo kwaye ikhethekile kwi-loft, eyilwe ngayo yonke intuthuzelo kunye nokufudumala, evumela iibhafu zokuntywiliselwa, ukonwabela ukuphuma kwelanga kusasa kunye nokukhanya kwenyanga ebusuku, ucamngca ngeenkwenkwezi.
indawo eqhelekileyo -
I-pool yethu ibekwe kwindawo eqhelekileyo kwaye ifumaneka, ngokuqeshwa kwi-reception, iiyure ze-2 ngosuku, ukuvumela induduzo enkulu kunye nokhuseleko.
Indawo yethu ye-gourmet ene-barbecue ivaliwe ngenxa yalo mzuzu, ngenxa yokhuseleko olukhulu kunye nokungabikho kwe-agglomeration yeendwendwe zethu.
Ukupaka - Ngaphakathi nangaphandle, simahla.
Indawo ekhethekileyo kwindawo yangaphakathi kunye neendawo ezithile ezifumanekayo, kwindawo yokurhoxa yolwamkelo lwekhondom.
Sisondele kuyo yonke into!
Iingxangxasi, iindawo zokutyela ezilungileyo, iimyuziyam, iicawa, iimarike kunye neziko lembali ngokwayo.
Iindlela ezisondele kakhulu kunye neengxangxasi, ezinje ngo-Usina Velha kunye neBonsucesso, enika umkhondo omangalisayo kunye neengxangxasi, kunye nokudibana okukhethekileyo nendalo. Indawo yokungena yi-2.5 km ukusuka kwindlu yakho encinci.
IMyuziyam yaseRodas do Tempo ikufuphi, kunye neebhaka, iivenkile zekofu, iindawo zokutyela kunye neepizza.
Ngelishwa, ukunceda wonke umntu ngcono, asamkeli izilwanyana zasekhaya.
Indlu ekwamkelayo ineminyango neefestile ezivulekele ithamsanqa lokungena!!
Uxolo, ukufudumala kunye neentshukumo ezilungileyo zikhona kuzo zonke iinkcukacha!
Yiza! Ndilinde wena!
Tyhila umqheba, khwela izinyuko zamaplanga kwaye uya kubona ukukhanya ngefestile enkulu, kunye nomva weentaba zePyrenees.
Iinkcukacha ezenziwe ngesandla, ezenziwe ngezandla zam, ngokuphinda zisetyenziswe iziqwenga eziphethe amabali kunye neentsingiselo.
4.98 ·Izimvo eziyi-181
4.98 · Izimvo eziyi-181
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi181
Kufuphi neZiko leMbali, kufutshane neekhefi, iibhari, iingxangxasi, iimyuziyam kunye neecawe zemveli.
Indawo ebumelwaneni yiAlto do Bonfim, yenye yezona ndawo zonwabele kwaye zihlala kakuhle ePiri. Sineendawo zokutyela ezigqwesileyo, iimarike, iikhemesti kunye neevenkile zekofu.
Eyona ndlela iphambili isikhokelela kwiingxangxasi eziphambili.
Amacebiso ambalwa enza umahluko omkhulu!
- Qala ukhenketho kwi-Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, ukusuka apho unombono omhle wePirenópolis. Ukusuka apho, yiya kwizitrato ze-cobblestone kwaye ufumane zonke iikona ezincinci zePiri.
- IZiko leMbali yiparadesi kwabo bangakwaziyo ukumelana nokuthenga. Sukuxhathisa...lol. Iimaski zeCavalhadas, amajuba avela kwi-Divino Espírito Santo Festival, amalaphu emibala yesixeko, iiwayini zendawo, ii-cookies ezenziwe ekhaya kunye neelekese kunye neemveliso ezimnandi ezisekelwe kwi-chestnut yaseBaru zifanelekile.
- Iikofu? Ndizakucebisa u02!
Café Pirineus, e Praça do Coreto, super zemveli kwaye kakuhle, apho umsebenzi unikezelwa kubafundi gastronomy, kwiyunivesiti karhulumente esixekweni, kwaye oku sihlala sinesimuncumuncu esitsha kwimenyu, umahluko kunye nomgangatho ogqithisileyo. Ngeempelaveki, umculo okhethwe kakuhle kakhulu, kunye nemidlalo ye-jazz kunye neblues, ngokweshedyuli yendlu.
I-Pe di Café-Indlu entsha, enesitayile esihle kumhombiso, inesindululo esahlukileyo, iikeyiki, iilekese, iikofu ezibandayo kunye nezitya ezishushu.
- Ukutshona kwelanga ePiri kuyamangalisa ngokwenene !! Ngokukodwa ebudeni bexesha lonyaka elomileyo, xa iimvula zinqabile, isibhakabhaka sithatha imibala eyahlukahlukeneyo ukususela kowona mbala uluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kutsho kobomvu. Ukubona kukukholelwa!! Iindawo ezimbini ezintle zokonwaba emva kwemini yi-Igreja Matriz kunye nePico dos Pireneus, ukusuka apho unokubona wonke ummandla ukusuka phezulu.
-Kufanelekile ukonwabela imekobume ngomculo ophilayo, iitafile zangaphandle eRua do Lazer, ibhiya emnandi ehanjiswa kwiibhari kunye newayini eziveliswa kulo mmandla.
Ukuba uyathanda ibhiya, ungaphoswa ziibhiya eziveliswa ePiri.
Ibhola kaPiri ilapha kanye etafileni!
NgeMigqibelo sinomboniso wezandla ePraça do Coreto. Amagcisa asekuhlaleni akhuthaza umsebenzi wawo. Inayo yonke into! Ukusuka kwi-gastronomy ukuya kubugcisa besilivere.
- Izakhiwo zembali zeCine Pireneus, iTheatro de Pirenópolis yangaphambili kunye neChamber and Prison House yangaphambili, apho iMyuziyam yeDivine ikhona namhlanje.
- Dlula kwiBhulorho yaseRio das Almas, ukusuka apho unokubona khona i-Igreja Matriz entle phakathi kwembonakalo yesixeko.
- Kwaye ukuba uthanda iibhulorho, kufanelekile ukuthatha umfanekiso weDona Benta Pênsil Bridge.
- Kwabo banandipha ubugcisa obungcwele, kuyafaneleka ukutyelela iCawa yaseNossa Senhora do Carmo, apho iMyuziyam yoBugcisa obuNgcwele ikhona.
- Iingxangxasi? Malunga neemeko ezingama-80 ezimangalisayo.
I-13 ayinakuphoswa! Ngeendawo ezikhethekileyo, iingxangxasi zibekwe kufutshane neSerra dos Pireneus, eyenza amanzi abe yikristale ecacileyo kunye netyuwa ephantsi. Kukho yonke incasa, ekufutshane, ekufutshane kakhulu kwindawo yethu ephezulu, u-Usina Velha (2.5km), iBom Sucesso (5km) kunye nezinye, ezikude kakhulu, ezinemizila kwaye zithandwa ngabakhweli beebhayisikile abakhetha ukhenketho olukhulu ngakumbi. (Bom Sucesso Waterfall, Araras Ingxangxasi, Coconut Ingxangxasi, Garganta Ingxangxasi, Paradise Ingxangxasi, Lobo Ingxangxasi, Príncipe Ingxangxasi, Santa Maria Waterfall, uLazaro Ingxangxasi, Rosario Ingxangxasi, Dragons Ingxangxasi, MEIA Lua Ingxangxasi, Usina Velha Ingxangxasi).
- Izitya ezinencasa eziqhelekileyo zaseGoiás zigxininiswe kumava okuhamba ePirenópolis kwaye kufanelekile ukuzama nganye yazo. Unokutyala imali kwiitya ezisekelwe kwi-pequi; kwiinkukhu ezimangalisayo; kwi-corpulent pie evela eGoiás (kunye okanye ngaphandle kwe-guariroba); kwi-mush ye-succulent (ityuwa okanye i-sweet) elungiselelwe ngengqolowa ecocekileyo; kwiikuki zasekhaya kunye neelekese kunye neengqayi ezincinci ezinamanzi aneentlobo zonke zezithako ezingenakucingelwa, kule, ndicebisa iConfraria do Boxexa. Kusafanele ukudlala ngenyama enkonkxiweyo kunye neepleyiti ezishushu ezidityaniswe ngeendlela ezahlukeneyo ukukhapha iibhiya zasekhaya kunye newayini.
Kukho iindawo zokutyela ezininzi esixekweni ezitya izitya zesintu, qiniseka ukuba uzama ezinye zazo, njengeVenda do Bento, Tempero do Rosário kunye neFazenda Babilônia, le, enezitya ezikhethekileyo eziveliswa ngayo yonke into ekhuliswayo neveliswa efama. ngokwayo, nezonka zamasi, hooter kunye iintlobo.
Ngaphezu koko, kukuhamba ezitratweni kwaye ukonwabela imeko nganye, ngaphandle kokulibala ukubhalisa iimaski eziqhelekileyo zeCavalhadas ezisasazwa kulo lonke elasePirenópolis kwiinguqulelo ezininzi ezahlukeneyo, kwiibhentshi, izikwere, iifestile okanye nakweyiphi na ikona...
Umbuki zindwendwe ngu- Auri
Kuhlala kuluyolo, ukutshintshiselana ngezimvo kunye nenkxaso eniyidingayo bafana. Ndifumaneka ngaphambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho. Impendulo yakho ibaluleke ngokwenene kum. Ndibamba ngothando kwaye ukuthakatha kwakho kuyandonwabisa! Ndiyayibulela loo nto, ungayeki ukundixelela!
Kwisayithi, sinokwamkelwa kunye nenkxaso ngexesha lokuhlala kwakho.
Kuhlala kuluyolo, ukutshintshiselana ngezimvo kunye nenkxaso eniyidingayo bafana. Ndifumaneka ngaphambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho. Impendulo yakho ibaluleke ngokwenene kum…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pirenópolis